EU Inopa Zimbabwe $18M Yekubatsira Madzimai Akazvitakura neVana Vadiki
HARARE — Sangano re European Union, EU, rapa hurumende mari inosvika mamiriyoni gumi nemasere emadhora iyo ichashandiswa muzvirongwa zvehutano munyika, kuburikidza nechirongwa che Health Transition Fund.
Vachitaura pachirongwa chekushambadza mari iyi, gurukota rezveutano, VaHenry Madzorera, vatenda zvikuru EU vachiti rubatsirwo urwu rwuchabatsira zvikuru madzimai akazvitakura pamwe nevana vadiki munyika.
VaMadzorera vanoti mari yabva kuEU ichabatsira zvipatara zvakasiyana siyana munyika kuitira kuti zvishande zvakanaka izvo zvinozoita kuti madzimai akazvitakura pamwe nevana vari pasi pemakore mashanu, vakwanise kurapwa vasingabhadhariswe mari.
Dr Madzorera vati nepamusana pekuti vamwe havana mari dzekubhadhara zvipatara, madzimai mazhinji akazvitakura anopedzisira obatsirwa kunze kwezvipatara uko vanosangana nenjodzi dzakawanda.
Vanga vakamirira veEU, Va Carl Skau, vatiwo zvakakosha kuti hutano hwavanhukadzi huchengetedzwe. VaSkau vati sangano ravo richaramba richitsigira chirongwa cheHealth Transition Fund.
Vanga vakamirira mukuru wesangano reUNICEF pamusangano uyu, Doctor Abou Kampor, vatiwo sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende mukuchengetedza hutano hwana amai pamwe nevana vadiki.
Homwe yeHealth Transition Fund yakatangwa nesangano reUNICEF mugore ra2011, nechinangwa chekudzikisa huwandu kwemadzimai akazvitakura nevana vari kufa munyika kuitira kuti Zimbabwe izadzise zviga zve Millenium Development Goals panosvika gore ra2015.
Madzimai akazvitakura anosvika gumi , ukuwo vana vari pasi pemakore mashanu vanosvika zana, vanonzi vari kufa zuva rega rega muZimbabwe.